Iimveliso zobumba Abavelisi | KwiChina Iimveliso zobumba Abaxhasi kunye nefektri
Ubuso beRoller Massager-02
Ufuna ukuzinyanzela kwingcambu ye-eyelash, emva kokuba ikliphu ye-eyelash imisiwe kwindawo yeengcambu ze-eyelash, igobe ngobunono phezulu kwakhona, yahlulele amacandelo ama-3 ngesiqwengana esiqhelekileyo, kwaye ube kufutshane nomsila we-eyelash ngakumbi, uzikhanyisele ngakumbi ukukhanya, ayinakuba yendalo kungenjalo.
I-Lipstick sisixhobo sokuthambisa esisetyenziselwa amanenekazi kubomi bemihla ngemihla. Ngaba uyazi ukuba uyifaka njani imilebe yokuqaba? Nazi ezinye zeendlela zokusebenzisa umlomo. iindlela 1. Uyipeyinta njani into yokuqaba umlomo ngebrashi yemilebe: Faka umaleko wokuqaba umlomo ngaphambi kokuwusebenzisa ukugcina imilebe yakho ingaxobuki. Ukuba amantombazana anemilebe emnyama anokufaka umaleko wesiseko sekhrimu kuqala, yisebenzise ngokulinganayo kwimilebe yokugubungela ukufihla ngeminwe, kwaye ukuba amantombazana anemilebe elula angenza ngaphandle kwesiseko. Zoba ipensile yomlomo ejikeleze imilo ...
Isithunzi seliso linyathelo elibalulekileyo kwindlela esiqhele ukwenza ngayo. Kukho imibala emininzi yesithunzi samehlo, kwaye indlela yokupeyinta yesithunzi samehlo nayo yahluke kakhulu. Isithunzi seliso kunzima kubaqalayo ukuqala.
Kungcono ukutshiza i-makeup okanye i-toner ngesiseko sesiponji kuqala, kuba umgubo owomileyo womgubo uza kulahla i-slag, kwaye uya kuguqula ukufuma kwisiseko kukhokelele kwizakhelo ezantsi zomile kakhulu;